स्पिनिङ स्टील ऊन स्पार्कलर
स्पिनिङ स्टील ऊन फोटोग्राफी र आगो प्रोजेक्ट
इस्पात ऊन, सबै धातुहरू जस्तै, पर्याप्त ऊर्जा आपूर्ति हुँदा जलाइन्छ। छिटो बाहेक, जंगली संरचना जस्तै यो सरल ओक्सीकरण प्रतिक्रिया हो । यो थर्माइट प्रतिक्रियाको आधार हो, तर यो एक सतहमा जलाउन सजिलो छ जब यसको सतह क्षेत्र धेरै हुन्छ। यहाँ एक मजेदार अग्नि प्रोजेक्ट हो जुन तपाइँले स्पिल स्पिललर प्रभाव सिर्जना गर्न स्टील ऊन जलाइदिनुहुन्छ। यो सरल छ र एक विज्ञान फोटोको लागि एक आदर्श विषय बनाउँछ।
स्पिनिङ स्टील ऊन स्पार्कलर सामग्री
तपाईं यो सामग्री केवल कुनै पनि स्टोरमा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईंसँग स्टील ऊन पैडहरूको छनौट छ भने, पतली फाइबरका साथ जानुहोस्, किनकि यी सबै भन्दा राम्रो जलाइन्छ।
इस्पात ऊन को प्याड
भारी स्ट्रिङ वा हल्का रस्सी
तिमी के गर्छौ
फाइबर बीचको ठाउँ बढ्नको लागि बिस्तारै स्टील ऊन थोपा टाँस्नुहोस्। यसले अधिक हावालाई प्रभाव पार्ने, प्रसारित गर्न अनुमति दिन्छ।
तार व्हिस्कभित्रको इस्पात ऊन राख्नुहोस्।
व्हिस्कको अन्त्यमा स्ट्रिङ संलग्न गर्नुहोस्।
धुलो वा अँध्यारो सम्म पर्खनुहोस् र एक खाली, अग्नि सुरक्षित क्षेत्र खोज्नुहोस्। जब तपाईं तैयार हुनुहुन्छ भने, 9-वोल्ट ब्याट्रीको टर्मिनलहरू टाँस्नुहोस्। बिजुलीको छोटो ऊन बेवास्ता गर्दछ। यसले मुस्कान र चमक गर्नेछ, लौमा फस्न सक्दैन, त्यसैले धेरै चिन्ता नगर्नुहोस्।
तपाईँका वरिपरि क्षेत्र खाली गर्नुहोस्, रस्सी पकड्नुहोस् र कताई सुरु गर्नुहोस्। छिटो तपाईंले यसलाई स्पिन गर्नुभयो, थप हावा तपाईं दहन प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया गर्न पाउनुहुनेछ।
स्पार्कलर रोक्न, रस्सी कताई रोक्नुहोस्। तपाईं बिस्कुटमा पानीको बाल्टीमा डुब्न सक्नुहुनेछ कि यो पुरा तरिकाले बुझाईएको छ र धातुलाई ठुलो बनाउनेछ।
एक ठूलो स्पिनिंग स्टील ऊन फोटोग्राफ लिदै
प्रभाव साँच्चै अचम्मलाग्दो छविहरू उत्पादन गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। छिटो र सरल तस्वीरको लागी, केवल तपाईको सेल फोन प्रयोग गर्नुहोस्। फ्लैश बन्द गर्नुहोस् र केहि सेकेन्डका लागि एक्सपोजर सेट गर्नुहोस्, यदि यो विकल्प हो भने।
एक गम्भीर तस्बिरको लागि तपाईंले गर्वमा आफ्नो भित्तामा प्रदर्शन गर्न सक्नुहुन्छ:
तिपाई प्रयोग गर्नुहोस्।
धेरै प्रकाश छ किनकी 100 वा 200 जस्तै कम आईएसई छनौट गर्नुहोस्।
30 सेकेन्डसम्म केहि सेकेण्डबाट एक्सपोजर समय छान्नुहोस्।
साँच्चिकै राम्रो प्रभावको लागि, एक चिन्ताजनक सतहमा पानी, जस्तै पानी जस्तै, वा सुरंग वा आर्क भित्रको स्टील ऊन स्पिन गर्नुहोस्। यदि क्षेत्र संलग्न गरिएको छ भने, स्पार्कले तपाईंको फोटोमा रूपरेखा गर्नेछ।
यो आगो हो , त्यसैले यो एक वयस्क मात्र परियोजना हो। समुद्र तट वा एक पार्किंग स्थलमा वा कुनै अन्य ठाउँमा ज्वालामुखी सामाग्रीबाट निशुल्क प्रोजेक्ट गर्नुहोस्। यो तपाईंको राम्रो बाहिरी हो कि तपाईंको कपाल को बरसात स्पार्क र चश्मा देखि तपाईंको नजर को रक्षा गर्न टोपी पहनने को लागि।
तिमिको लागि थोरै छ? सास फेर्ने प्रयास गर्नुहोस्!
धुम्रपान बम व्यञ्जनहरू
रातो आगो निर्देशन
नमक र सिरका क्रिस्टल
गैर विषैले क्रिसमस ट्री फूड
जिंक मेटल प्राप्त गर्न दुई तरिका
बैंगनी आगो - रंगीन आगोका लागि सजिलो निर्देशन
ईन्जिनियरिङ् विज्ञान मेला परियोजनाहरु
ब्ल्याक क्रिस्टल कसरी विकास गर्ने?
परिभाषा र Pseudowords को उदाहरण
एक प्रतिशत र पत्र ग्रेड चित्रा कसरी गर्ने
तपाईको फूलको डूडल्स के हो?
शिक्षकलाई छाप्ने 10 तरिका
कसरी फ्रान्सेलीमा सिकाउन भन्नुहोस्
तपाईंको चन्द्रमा ज्योतिष मा मकरिया साइन यिनी गर्नुहोस
कुन उपकरण मलाई केडीई सुरु गर्न आवश्यक छ?
21 अप्रत्यक्ष उद्धरणहरू 'पश्चिमी पश्चिमी मोर्चामा सबै शान्त'
विश्वव्यापी डिजाइन - वास्तुकलाका लागि सबै
रंग को महिलाहरु लाई नसबंदी मा अमेरिकी सरकार को भूमिका
के तपाईं भूतहरूको डरलाग्दो हुनुपर्छ?
कैसीनो पोकर खेलहरू
मेट्रोपोलिटन कलेज अफ न्यूयर्क प्रवेश
चौथो सम्पत्ति के हो?
प्रमुख अंग्रेजी भाषा भाषा इजरायली समाचार पत्रहरूको सूची
हस्तान्तरण टोकरी (आधा आशिष्)
कुरा सस्ता छैन: टीभी टक शोको संक्षिप्त इतिहास
10 मजेदार धन्यवाद भिडियोहरू
10 प्रतीक रणचरा गीतहरु
कसरी ट्रोटिक क्यान्सर र ट्रोटिकको म्याट्रिक नामकरण गरिएको थियो
एक गैप वर्षको लाभ
के आइसनिक एनिमेटेड शो 'सिम्पसनहरूले यसको कोर्स चलाउँछन्?
मच्छरहरू के असल छन्?
चन्द्र देवता र चन्द्रमा देवी
यतावादमा चारवटा महत्त्वपूर्ण संख्याहरू
फोटो गैलरी को रानी एनी आर्किटेक्चर
पिक3बट गर्दै